रुसले संसारमा नै पहिलो कोरोनाको खोप बनाए पछि अमेरिकाले यसरी गर्यो स्वागत ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/रुसले संसारमा नै पहिलो कोरोनाको खोप बनाए पछि अमेरिकाले यसरी गर्यो स्वागत !
रुसले संसारमा नै पहिलो कोरोनाको खोप बनाए पछि अमेरिकाले यसरी गर्यो स्वागत !
वासिङटन – कोरोनाविरुद्ध रुसले बनाएको खोपले काम गर्ने अमेरिकाले वि`श्वास व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्र`पति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी खोप प्रभा`वकारी र उप`योगी हुने विश्वास शुक्रबार व्यक्त गर्नुभएको हो ।
“मलाई रुसले बनाएको भ`निएको खोपका बारेमा धेरै थाहा छैन, तर त्यो प्रभा`वकारी, उपयोगी हुन्छ र त्यसले काम गर्छ भन्ने मलाई विश्वा`स छ,” उहाँले भन्नु भयो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाईट हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा उहाँले रुसी खोपका बारेमा सकारात्म“क धारणा राख्नु भएको हो । कोरोनाभा“इरस विरुद्धको खोप तयार पार्न रुस विश्वको पहिलो राष्ट्र हुने पनि उहाँको भनाई छ ।
“मलाई जानकारी भएसम्म कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप तयार पार्न रुस विश्वकै पहिलो मु`लुक भएको छ, यो दर्ता भइसकेको पनि मैले थाहा पाएको छु,” उहाँले बताउनुभयो । उहाँले चाडै नै ठूलो मात्रामा सो खोपको उत्पादन र प्रयोग हुन थाल्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्र`पति ट्रम्पले यो साह्रै नै महत्वपूर्ण रहेको पनि बताउनुभयो ।
आधारभूत प्रक्रियाहरु पूरा गर्ने र परीक्षण सवै सफल भएपछि आधिका`रीक निकायले त्यसको प्रयोगका लागि स्विकृति दिने उहाँको भनाई छ । नयाँ खोप प्रक्रियामा गएको छ र अहिले सम्म सका`रात्मक नतिजा आएको थाहा पाउँदा आफूहरु`लाई अन्त्यन्त धेरै खु`शी लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले अमेरिकमा पनि केही बैज्ञानिकहरुले तीन ओटा खोपलाई परीक्षण गरिरहेको र त्यो अहिले तेस्रो चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म औषधीको औपचारिक प्रयोग गर्न नपाएर विश्व`भरी म`मा`रीको रुपमा फैलिएको कोरानो भाइरस वि`रुद्ध विश्व भरी धेरै बैज्ञा`निकहरुले औ`षधी बनाइरहेको दाबी गरेका छन् । तर ती सवै परी`क्षणका क्र`ममा रहेका छन् भने अहिले सम्म विश्व`स्वास्थ्य संगठनले कसैलाई पनि कोरोनाको औष`धीको मान्यता दिएको छैन ।